Wamkelekile kweyethu imo yotoliko | US Taalsentrum
Wamkelekile kweyethu imo yotoliko
Op 27/11/2019 geplaas · In Artikels in Xhosa, Jongste nuus, Navorsing, Nuutste nuus geplaas
Iwekhshophu yotokilo engamava – leyo yinto ethe yeza neqela lophandonzulu leeNkonzo zoToliko kwiZiko leeLwimi ukulungiselela iNkomfa yeYunivesithi yarhoqo ngonyaka engeMfundo ngokuFundisa nokuFunda (SoTL) ngowama-29 nangowama-30 kweyeDwarha. Wakhe wazibuza malunga nokwenzeka kubomi nexesha letoliki yezemfundo? Abasebenzi beYunivesithi abebezimase le nkomfa baye bazibophelela ukuba babekwe kwimeko apho bazakutolika kwiimeko zamagumbi okufundela ezingezizo ezokwenyani. Ezi meko zokuzenzisa bezinenjongo ethile eyodwa – ekukunika abathathi-nxaxheba amava okwenyaniso kumntu ngamnye buqu (kunye nesishwankathelo esincinci sentshayelelo) malunga neemfuno, iimvakalelo neenkqubo zengqiqo ezenzeka ngexesha lokutolika kwezemfundo okwenziwa ngaxeshanye nalowo uthethayo.
Nangona abathathi-nxaxheba baye bafumana inkxaso kubahlobo be-SU abaziitoliki ezinamava, inkxalabo ibicace gca ngelixa uEdward de Kock, umbonisi wokuqala, egadlela ngesiNgesi (ngesantya esifanelekileyo) ‘isifundo’ ngembali nebesizakutolikwa ngeAfrikansi. Abathathi-nxaxheba baye bazijula ijacu – amagama eziphumela eqengqeleka, kwakunye nokubhedulula amehlo, ukuphefumlela phezulu, ukuhleka kancinci ngenxa yexhala nokundumzela obekuthi kwenzeka xa kunzima ukufumana amagama afanelekileyo ngokukhawuleza. Ingxelo edlamkileyo ethe yalandela emva kweseshoni yokuqala yesifundo ibiquka amagama namabinzana afana nokuthi “ukuphosa igama nje elinye kundenze ndaphulukana nawo wonke umongo”, “uhlobo lwesigama lulo oluye lwandikhupha endleleni”, “andizange ndaqonda ukuba kunzima kangakanani” kwakunye nokuthi “nisithatha phi esi sigama?!”
Nangona ubumnandi nolonwabo belukhona ngethuba lale wekhshophu, yona ibingumcimbi ondilisekileyo. Abathathi-nxaxheba baye bafumana ukuyiqonda ngcono imingeni nobumnandi botoliko lwezemfundo, ubugcisa beqela lezotoliko kwiZiko leeLwimi kwakunye nokubaluleka kotoliko e-SU. Utoliko lusebenza njengohlobo lwenkxaso ngokujoliswe kwiilwimi, oluqulathwe kwiPhepha-nkqubo lezeeLwimi lase-SU, ukuncedisa abafundi abasokola ukuluqonda ngokufanelekileyo ulwimi ekuhlohlwa ngalo kumagumbi okufundela. Ngokusebenzisa utoliko bangatsho bafumane ukufikelela ngokupheleleyo koko kuqulethwe zizifundo ezo, bazuze ekugqithisweni kolwazi olunokuqondwa baze baxhamle ekudalweni kweengqweqwe ngeengqweqwe zentsingiselo.
Nuwe webbaadjie vir Taalsentrum
Leer saam met ons Afrikaans praat
’n Gedenkmuur vir Pumlani
Udonga lwesikhumbuzo sikaPumlani
Só maak jy by aanlyn geleenthede
US TaalsentrumArtikels in Xhosa Jongste nuus Navorsing Nuutste nuusWamkelekile kweyethu imo yotoliko